Yintoni i-POE? Kuhlawulwe, kungumnikazi, kufunyenwe ... kwaye kwabelwana ... kunye neMedia eguqulweyo | Martech Zone
IPHAWU yi Isalathiso ngeendlela ezintathu zokuhambisa umxholo. Imithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyeMnini kunye noMvuzo zonke zizicwangciso ezifanelekileyo zokwakha igunya lakho kunye nokusasaza ukufikelela kwakho kwimidiya yoluntu.
Ihlawulwe, yeyabanini, iMedia
Imithombo yeendaba ehlawulelweyo -Kukusetyenziswa kwamajelo entengiso ahlawulelweyo ukuqhuba ukugcwala kunye nomyalezo opheleleyo wohlobo lwekhontenti kumxholo wakho. Isetyenziselwa ukwenza ulwazi, gxuma ezinye iindlela zosasazo kunye nokwenza ukuba umxholo wakho ubonwe ngababukeli abatsha. Amacebo abandakanya ukuprinta, unomathotholo, i-imeyile, ukuhlawula ngokucofa, iintengiso ze-facebook, kunye neetweets ezikhuthaziweyo. Ukuhlawula abachaphazeli banokuhlawulwa kwimidiya xa kufikelelwe kwisivumelwano kwimbuyekezo.
Imithombo yeendaba engumnini -Imithombo yeendaba, umxholo kunye namaqonga aphantsi okanye aphethwe ngokupheleleyo okanye alawulwa lishishini. Indima kukugcina umxholo, ukwakha igunya kunye nobudlelwane, kwaye ekugqibeleni ubandakanye ithemba okanye umthengi. Amacebo abandakanya ukupapasha iiposti zebhlog, ukukhutshwa kweendaba, amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, iincwadi kunye nohlaziyo lweendaba ezentlalo.
Imidiya eFumanekileyo -Ukufumana ukukhankanywa kunye namanqaku kumajelo amiselweyo angafumanwanga ngentengiso- amaxesha amaninzi oku kukugubungela iindaba. Imithombo yemithombo yeendaba efumeneyo sele isele inegunya, inqanaba kunye nokubaluleka kwishishini elinikiweyo okanye isihloko, ke ukufumana ukukhankanywa kuyanceda ekwakheni igunya lakho kunye nokusasaza ukufikelela kwakho. Amacebo abandakanya ubudlelwane boluntu, uphando lwezinto eziphilayo, kunye neenkqubo zokufikelela ezingahlawulwanga kubashukumisi bezoshishino kunye neeblogi kunye nokunxibelelana kwezentlalo.
Kuthekani ngemithombo yeendaba ekwabelwana ngayo?
Ngamanye amaxesha abathengisi bayahlukana Ukwabelana ngeendaba ukuthetha ngokuthe ngqo kwizicwangciso zokuqhuba ukugcwala kwabantu ngokwabelana ngemidiya yoluntu. Oku kunokubonelelwa ngentengiso yemidiya yoluntu, ukuthengisa okunefuthe, okanye ngokulula nje ukuphuhlisa iindlela zokubonelela ngokwasentlalweni. Izicwangciso zosasazo zeendaba ekwabelwana ngazo zinokudityaniswa kwimithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyeyabanini, kunye neyasetyenzisiweyo.
Linda… Kwaye ujonge iMedia?
Esi sisicwangciso esikhulayo kubathengisi bomxholo. Imithombo yeendaba eguqulweyo ikwayindibaniselwano yemithombo yeendaba ehlawulweyo, eyeyabanini, kunye neyokufumana. Umzekelo inokuba ndibhalela iForbes. Mna efunyenwe indawo yokubhala ene IBhunga le-Arhente yeForbes… Kwaye iyi imali Inkqubo (yonyaka). Ngu ngumnini NguForbes onabahleli nabonyuselo babelwe ukuba baqinisekise ukuba nawuphi na umxholo opapashiweyo uhlangabezana nezikhokelo zabo ezingqongqo zokuqinisekisa umgangatho kwaye zisasazwa ngokubanzi.
I-POE ayikhawulelwanga kwimithombo yeendaba
Le infographic emnandi kwi-POE evela kwi Ukusebenzisana kweeNtengiso zeKhanada kwaye Iqela leBrainstorm. Ithetha ngokuthe ngqo kwi-POE kwikota yemidiya yoluntu endikholelwa ukuba iyancipha. Ukuthengisa umxholo, intengiso, ukuthengisa okukhangela, ukuthengisa okuhamba ngeselula… onke amajelo entengiso adibene ngokupheleleyo nasiphi na isicwangciso semithombo yeendaba esihlawulelweyo, esinabanini, okanye esamkelweyo.
Kwaye ezi zicwangciso zinokwanda ngokupheleleyo ngaphaya kwendawo yedijithali kwintengiso yesiko. Amashishini abuyisela izinto zokuprinta, umzekelo, kwidijithali. Amashishini athenga indawo yentengiso kwiibhodi zeebhodi ukuqhuba ukugcwala kwiiwebhusayithi ezizezabo. Kwakhona… I-POE ingundoqo kuso nasiphi na isicwangciso-qhinga esihlawulelweyo okanye sentengiso.
I-POE infographic ihamba kuwe:
Ukuchaza iimodeli ze-POE
Imizekelo yezicwangciso ze-POE
Uyicwangcisa njani isicwangciso sakho se-PoE
Amaqhinga aneendlela ze-POE
Amacebo e-Digital POE kwizixhobo zonke
Imiba yokuzibandakanya ngokubhekisele kwi-POE
Iindidi zeMithombo yeendaba ehlawulelweyo, eyeMnini, kunye neMvuzo
Umlinganiso we-POE impumelelo
tags: intengisoimidiya ehlanganisiweyoeendaba ezuziweyoNdifumene imidiya yoluntuFacebookIAB CanadaUkusebenzisana kweeNtengiso zeKhanadaurhwebo lwezinto eziphilayoabeendabaamajelo asekuhlaleniImidiya ehlawulwayoehlawulwa kwimidiya yoluntuPoeimidiya ekwabelwana ngayoIqela leBrainStorm
Uzifaka njani iiNdawo ezininzi zokuThumela kwiRekhodi yakho ye-SPF